Umaki: api | Martech Zone
Njalo ngesonto ngichitha isikhathi nomngane wami omuhle, u-Adam Small. U-Adam ungunjiniyela omkhulu… usungule ipulatifomu yokukhangisa yendawo yonke enezici ezinhle - ngisho nokungeza izinketho eziqondile zokuthumela ama-ejenti akhe ama-postcard ngaphandle kokuwakha! Njengami, u-Adam usethuthuke kulo lonke uhla lwezilimi zokuhlela nezinkundla. Vele, ukwenze ngobungcweti futhi nsuku zonke kanti nginamakhompiyutha athuthukisa konke
Izindlela ezinhle zokukala noma yiluphi uhlelo lokusebenza online ukuhlukanisa isikhombimsebenzisi sakho kusuka kusendlalelo sedatha usebenzisa i-Application Programming Interface (API). Uma umusha entuthukweni, i-API ingumqondo olula impela. Njengoba nje ungena futhi usebenzisa uhlelo lwewebhu ngesiphequluli kanye nochungechunge lwezicelo ze-HTTP, uhlelo lwakho lokusebenza lungenza into efanayo nge-REST API kanye nohlelo. Njengoba abantu abaningi bengena ezinhlelweni, bona